के–के हुन त प्रदेश नं १ का आर्थिक आधारहरु ? — News of The World
के–के हुन त प्रदेश नं १ का आर्थिक आधारहरु ?
–सुमन घिमिरे,फागुन २३, २०७४
देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं १ धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापारको हिसाबले अब्बल देखिएको छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनका सम्भावना छ । प्रदेशमा यसअघिका अञ्चल मेचीका चार, कोशीका छ र सगरमाथाका छमध्ये चार गरी १४ जिल्ला समेटिएका छन् । पच्चीस हजार ९०५ वकिमी क्षेत्रफलको सो प्रदेशको जनसङ्ख्या ४५ लाख ३४ हजार ९४३ छ । विसं २०६८ को जनगणनानुसार जनघनत्व १७५ दशमलब ०६ छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुसहित तीन जिल्ला हिमाल, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामसहित आठ जिल्ला पहाड तथा झापा, मोरङ र सुनसरी तराईका जिल्ला हुन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ वटा गाउँपालिका सो प्रदेशमा छन् ।
वर्तमान प्रदेश सरकारले मुख्यमुख्य पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना नै तयार पारेर संवद्र्धनमा अघि बढ्नुपर्ने मोरङ क्षेत्र नं १ ९क० का प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साँवा बताउनुहुन्छ । सिएनएनले गरेको सर्वेक्षणमा विश्वकै १२ औँ उत्कृष्टमध्ये आठौँ उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा सूचीकृत धनकुटाको नाम्जे प्रचारप्रसार र पूर्वाधार नहुँदा ओझेलमा परेको नाम्जे होमस्टेका अध्यक्ष अनिलकुमार रानाको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी प्रचारप्रसारमा सहयोग पु¥याए विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा विकास हुने उनको भनाइ छ ।
कृषिः तराईका झापा र मोरङ अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरका सूचना अधिकृत राजेन्द्र उप्रेती बताउनुहुन्छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक सरदर १२ लाख बढी मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा मकै, गहुँ, अमलिसो, अदुवा, अलैँची, चिया, आलुलगायत पनि उत्पादन हुन्छ । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म मात्रै प्रदेशका जोगवनी र काँकडभिट्टा नाकाबाट रु दुई अर्बभन्दा बढीको कृषिउपज ९जुट बाहेक० भारत र बंगलादेश निर्यात भएको थियो ।
नेपालमा पहिलो पटक संघीयता लागू भएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी सहकार्य हुनुपर्ने मोरङ उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागो बताउछन् । स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । ठोस नीति बनाएर पर्यटन, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरे प्रदेशको सम्पन्नताका लागि आधार तयार हुने उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भट्टराई बताउछन् ।
ट्यांकरमा आधुनिक ‘लक सिस्टम’ लागू
जातीय संग्रहालय स्थापना गरिने
मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्रादेशिक विवि बनाउन सुझाव
पाँच वर्षभित्र ७०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिने- मुख्यमन्त्री शेरधन राई
प्रदेशसभाको बैठकमा अनियमितता सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण
मुख्यमन्त्री राई भन्छन्–राष्ट्रिय एकता जोगाउने शिक्षा चाहिन्छ